Auto Recovery ဇစ်တံခါး China Manufacturers & Suppliers & Factory
Auto Recovery ဇစ်တံခါး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Auto Recovery ဇစ်တံခါး ထုတ်ကုန်များ)
Self Recovey လျင်မြန်သောမြန်နှုန်း overhead Roller တံခါး
Self-Repair မြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သင်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါစေသွားရန်စီစဉ်ထားသည့်နေရာတိုင်းတွင်၊ PVC Zipper Door (ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရန်တံခါး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတံခါး၊ အလိုအလျောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတံခါး) သည်သင်၏ဘေးတွင်အမြဲရှိသည်။ သင်ယင်း၏တည်ရှိမှုကိုလုံး ၀...
PVC မြန်နှုန်းမြင့် overhead ဇစ်တံခါး
Self-Repair မြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် မျက်မှောက်ခေတ်ဘဝ၌လူတိုင်းလျင်မြန်စွာရပ်တည်နေကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးသည်စောင့်ဆိုင်း။ မရပ်နိုင်။ လူအုပ်ကြီး၌သင်စောင့်နေသည့်အချိန်၊ တံခါး ၀ င်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင်၏ပြtheနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့် PVC Zipper Door...
Automatic Electric Trackless Electric Retractable Gate Electric retractable door isakind of door that can move and retract freely to control the size of door opening to control the interception and release of pedestrians or vehicles. The telescopic door is mainly composed ofadoor body,adriving motor,aslide...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း PVC auto-ပြန်လည်နာလန်ထူဇစ်ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်တံခါး
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း PVC auto-ပြန်လည်နာလန်ထူဇစ်ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်တံခါး ဇစ်လျင်မြန်စွာတံခါးကိုအင်္ဂါရပ်များ: ဖွင့်ပါ: 1.2-2.0 m / sec အမြင့်လုံစွမ်းအင်ထိရောက်: ဇစ်မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာနှင့်ကုလားကာရထားလမ်းနည်းပညာအများဆုံးစွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုယ်ပိုင်ငြိမ်းစေလျက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ငွေစုဘို့အမြင့်ဆုံး...
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှာ Automatic PVC အထည်အလိပ်အမြင့်မြန်နှုန်း Rolling တံခါး
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှာ Automatic PVC အထည်အလိပ်အမြင့်မြန်နှုန်း Rolling တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2...
Automatic Industrial PVC Fabric Rapid Shutter Door
Automatic Industrial PVC Fabric Rapid Shutter Door Hong fa PVC high speed doors maximize energy savings by minimizing the amount of air exchange that can escape each time the doors open and close. Unlike traditional hard bi-parting doors, flexible door and other roll-up doors have the ability to withstand forklift...
တံခါးဖွင့် automatic PVC Rapid Roll
စက်မှုအလိုအလျောက် PVC အေးသိုလှောင်ဇစ်တံခါး
စက်မှုအလိုအလျောက် PVC အေးသိုလှောင်ဇစ်တံခါး အဆိုပါပျော့ကုလားကာအမြန်အအေးသိုလှောင်မှုတံခါးကိုရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းရှိပြီးနိမ့်သောအပူချိန်အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ချောမွေ့နှင့်အကျိုးရှိစွာစစ်ဆင်ရေးကိုသေချာစေရန်တစ်အပူအင်တိဖရိစ်ဓါတ်စက်ကိရိယာနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။...
roll Up ကိုတံခါးပေါက်မှာ Automatic Servo Brushless Motors က
Supply နိုင်ခြင်း: 10000 Set/Sets per Month
မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကို ac servo motor ကို
Auto Recovery ဇစ်တံခါး Auto Recovery Shutter တံခါး internal PVC ဇစ်တံခါး auto-Recovery ကို PVC မြန်တံခါး Servo ဇစ် Fast တံခါး auto-Recovery ကို PVC မြန်ဇစ်တံခါး high-tech မြန်တံခါး Auto Repair Shutter တံခါး